Manomboka manaiky ireo mpiasa avy any ivelany i Japana, saingy mizarazara kosa ny hevi-bahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Oktobra 2018 12:39 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, عربي, Ελληνικά, 한국어, русский, 日本語, English
Mpandeha an-tongotra miampita arabe ao Osaka feno olona. Sary avy amin'ny Pixabay.
Fantatra amin'ny maha-fiarahamonina tokambolo azy i Japana. 2 isanjato monja amin'ny mponina no olom-pirenena vahiny, raha 4 isanjato kosa ny ao Korea atsimo mpifanolo-bodirindrina. Na dia izany aza, dia mety tsy hanana-tsafidy i Japana fa hanaiky ireo mpiasa maro avy any ivelany mba hiatrehana izay ho fihenan'ny mponina miasa noho ny fahanterana sy ny taham-piterahana ambany. Satria nahatratra ny faratampony indrindra tao anatin'ny 40 taona mahery ny tsy fahampian'ny mpiasa ao amin'ny firenena, ka misy tolotr'asa 1,48 isaky ny mangataka asa, misy ny marika fa mihevitra ny fifindra-monina ho vahaolana amin'izany ny governemanta Japoney.
Nanome vahana ny fanaovaozana anatiny hatrany i Japana izay nisorohana ny fifindramonina ho toy ny vahaolana, tahaka ny fandrisihana ireo mpiasa efa nisotro ronono mba hiditra indray eo amin'ny tsenan'ny asa sy ny fampiasana fahaizana artifisialy.
Ny ampahany lehibe amin'ny politikan'ny praiminisitra Shinzo Abe momba ny fanavaozana ara-toekarena, antsoina hoe “Womenomics” [vehivavy+toekarena], dia midika ihany koa hoe fampitomboana ny vehivavy ao anatin'ny tsenan'ny asa. Na dia nahitana fahombiazana voafetra aza ny politikany, dia mety tsy ampy hamenoana ny banga eo amin'ny tsenan'ny asa ny fanavaozana anatiny.
Ho setrin'ity ahiahy tsy mitsaha-mitombo ity, nilaza tao amin'ny Fihaonambe Ara-Toekarena Iraisampirenena ny minisitry ny raharaham-bahiny Japoney, Taro Kono, tamin'ny 14 septambra 2018 fa mila manaiky ireo mpiasa vahiny bebe kokoa i Japana, milaza fa tsy afaka manohana ny fiarahamonina Japoney ny politika ankehitriny.
“Manokatra ny firenenay izahay.”
“Manokatra ny firenenay izahay”, hoy i Kono. “Miezaka mamolavola politika vaovaon'ny fahazoan-dàlana hiasa izahay amin'izao fotoana izao, ary heveriko fa ny rehetra dia mety horaisina any Japana raha toa ka vonona ny hiaty ao amin'ny fiarahamonina Japoney izy ireo.”
Nanambara drafitra hanintona mpiasa vahiny 500.000 ho any Japana hatramin'ny taona 2025 ihany koa ny Praiminisitra Abe vao haingana mba hamenoana ny tsy fahampian'ny mpiasa anyamin'ny fambolena, fananganana, trano fandraisam-bahiny, ary fitsaboana antitra amin'ny alàlan'ny famoronana karazana visa vaovao dimy taona ho an'ny mpiasa vahiny tsy matihanina. Mba hanohanana ireo olom-pireneny antitra sy hitazonana ny mponiny eo amin'ny 100 tapitrisa, dia mila manaiky ireo mpifindra monina 200.000 isan-taona i Japana.
Nanana mpiasa vahiny 1.28 tapitrisa ny firenena tamin'ny volana Oktobra 2017, ahitana ireo mpiasa Shinoa izay mandrafitra ny ampahany lehibe indrindra efa ho 30 isanjato, avy eo ny avy any Vietnam, Filipina ary Brezila.
Manjary mihabetsaka hatrany ireo mpiasa mpikirakira vola tsy Japoney, ahitana mpiasa tsy Japoney ny 5 isanjaton'ny mpiasan'ny magazay misokatra hatrany FamilyMart.
Raha lasa iraisampirenena hatrany ny faritra an-drenivohitra, olona iray amin'ny Japoney 20 mahery monina any Tokyo amin'izao fotoana izao no teraka tany ivelany. Ho an'ireo tanora roapolo taona monina any Tokyo, mitombo ho iray amin'ny olona valo izany isa izany.
Ho an'ny olona sasany, efa misy ny fifindra-monina ao Japana.
Raha mbola sahirana i Japana mikasika ny tsy fanekena na fanekena ireo mpifindra monina, dia efa tonga izy ireo, ary tsy toy ny hoe nisy ny fandraràna ny fifindra-monina na zavatra hafa. Somary paradisa ho an'ireo mpifindra monina i Tokyo amin'izany.
Fifantohana amin'ny “mpianatra asa” vonjimaika, fa tsy “mpifindra monina”
Mpiasa vahiny maro no miditra ao amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny rafitra “mpianatra asa ara-teknika”, fandaharanasa tamin'ny taona 1990 natao hamindrana fahaizana ara-teknika. Mahita ireo mpitsikera fa mandrisika ny asa tsotra sy mora ity sehatra ity amin'ny famelàna ireo orinasa eo amin'ny sehatra indostrialy, fambolena sy jono mba hanarama tanora avy any ivelany amin'ny karama ambany.
Tsy afaka miova asa ireo mpianatra asa, ary nisy ny tatitra marobe nilaza momba ny fampiasana azy ireo mandritra ny ora lavabe tsy ara-dalàna sy ny fanararaotana ara-batana ataon'ny mpampiasa. Nasaina nandray anjara tamin'ny asa fikarakarana nokleary tao Fukushima mihitsy aza ireo Vietnamiana mpianatra asa. Mpisera Twitter Mulboyne nizara tatitra navoakan'ny gazety Mainichi momba ny mpiasa Vietnamianina iray, izay nahita asa tsara karama amin'ny asa birao rehefa very asa tamin'ny karama mitovy amin'ny 200 dolara isam-bolana no sady miasa tontolo andro:
Na dia nitanondrika aza izy, dia nahita azy ny polisy rehefa nanao fanadihadiana momba ny raharaha iray hafa. Nosamborina ny volana Aprily izy. Manamarika ny lahatsoratra fa nilaza ireo mpiara-miasa aminy fa olona niasa mafy, tena mazoto ary tsy tara mihitsy izy.
Raha mbola afaka mijanona mandritra ny dimy taona farafahabetsahany ireo mpianatra asa, dia ahafahan'ireo nahavita ny fandaharana mba hijanona mandritra ny dimy taona fanampiny ny fanavaozana natolotr'i Abe. Na dia izany aza, mijanona amin'ny fandrisihana fijanonana vonjimaika ny fifantohana mihoatra noho ny fifindra-monina maharitra. Tsy afaka mitondra ny fianakaviany miaraka aminy ireo mpianatra asa ary tsy maintsy miverina any an-tanindrazany rehefa vita ny fandaharana. Izany dia mety hanakana azy ireo ara-teknika tsy hangataka fonenana maharitra satria iray amin'ireo fepetra ny hoe nonina tany Japana nandritra ny folo taona na mihoatra.
Ny fandriam-pahalemana sy ny firindrana ao Japana dia mifototra amin'ny maha-firenena tokambolo azy”
Raha efa nanaiky mpiasa vahiny betsaka kokoa i Japana, tsy ny olon-drehetra no mahazo aina amin'ity fiovàna ity. “Maro ny olona any Japana no mino fa ny fandriam-pahalemana sy ny firindràn'ny firenena dia mifototra amin'ny maha-firenena tokambolo izay vitsy vahiny,” hoy i Chris Burgess, mpikaroka momba ny fifindra-monina sady mpampianatra momba ny fianarana an'i Japana ao amin'ny Oniversiten'i Tokyo, Tsuda Juku, tamin'ny tafatafa niarahana tamin'ny CNN.
Araka ny voalazan'ny Burgess, mitovy amin'ilay adihevitra “heloka bevava vahiny” ity finoana ity, tahotra fa mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka ny fisian'ny vahiny marobe – tahotra izay nitombo tao anatin'ny taona vitsy noho ny herisetran'ny mpampihorohoro tany Eorôpa sy tany amin'ny firenen-kafa manana tahan'ny fifindra-monina ambony.
Mampiseho ny fitsapa-kevi-bahoaka vao haingana fa mizarazara ny hevi-bahoaka momba ity olana ity.
Nahita ny fitsapa-kevitra nataon'ny Nikkei fa mizarazara ny hevitra raha tokony hanaiky mpiasa vahiny bebe kokoa i Japana, izay 42% manaiky ary 42% tsy manaiky. Na dia izany aza, antony lehibe mamaritra ny fomba fifidianana ny taona. Teo amin'ny 60% amin'ireo 18-29 taona dia nanaiky ny fitomboan'ny fifindra-monina, raha nanohitra kosa ny 30%. Hita teo amin'ireo 70 taona mahery kosa ny tranga mifanohitra amin'izany, izay 30% manohana ary 45% manohitra. Ny tanora no mety manaiky kokoa ny vahiny satria izy ireo no voakasika mivantana amin'ny fihenan'ny mponina, ary lehibe tao anatin'ny fiantraikan'ny fanatontoloana izy ireo.
Ao amin'ity lahatsary avy amin'ny Asian Boss ity, nankany an-dalambe ireo mpitati-baovao mba hahalala ny fahatsapan'ny Japoney momba ity lohahevitra ity:
Raha tsy manan-kevitra mikasika ny fampiasana mpiasa vahiny ny sasany tamin'ireo natao fanadihadiana, ny hafa kosa nanambara fa ilain'ny Japoney ny manaiky olona avy amin'ny firenena samihafa ary ho lasa misoka-tsaina kokoa. “Tia ny Amerikanina ny Japoney ary manaiky azy ireo, fa ho an'ny olona avy any amin'ny firenena Aziatika hafa, mitady ho “masiaka” kokoa ny Japoney, hoy ny tovovavy iray nanazava.
Mbola tsy fantatra raha ho lasa firenena maro ara-kolontsaina i Japana amin'ny fotoana rehetra amin'ny hoavy, saingy mazava fa ny fitomboan'ny fanatontoloana dia efa misy fiantraikany ao amin'ny firenena. Raha momba ny fiantraikan'ny fiovan'ny firafitry ny isan'ny mponina ao Japana, ny fotoana ihany no afaka hilaza izany.